A kpọrọ ndị mmadụ ka ha bịa rie ma ṅụọ n’akwụghị ụgwọ (1-5)
Chọọnụ Jehova, kwerekwanụ na ihe o kwuru ga-emezurịrị (6-13)
Ụzọ Chineke dị elu karịa nke mmadụ (8, 9)
Okwu Chineke ga-emezurịrị (10, 11)
55 Ndị niile akpịrị na-akpọ nkụ,+ bịanụ ṅụọ mmiri.+ Ndị na-enweghị ego, bịanụ zụrụ ihe rie,Bịakwanụ zụrụ mmanya na mmiri ara ehi+ n’ejighị ego, n’akwụghịkwa ụgwọ.+ 2 Gịnị mere unu ji na-emefu ego maka ihe na-abụghị nri? Gịnịkwa mere unu ji jiri ego unu kpatara* na-azụ ihe na-agaghị eju unu afọ? Geenụ m ntị nke ọma ma rie ihe dị mma.+ Mgbe ahụ ka nri na-edozi ahụ́ ga-atọ unu* ezigbo ụtọ.+ 3 Tọọnụ ntị n’ala bịakwute m.+ Unu* ga-adị ndụ ma unu gee ntị. Mụ na unu ga-agbakwa ndụ ga-adịru mgbe ebighị ebi+Otú ahụ m kwere Devid nkwa na m gaghị akwụsị ịhụ ya n’anya.* E kwesịrị ịtụkwasị m obi na m ga-emezu nkwa a.+ 4 Ahọpụtala m ya ka ọ na-agbara mba niile àmà,+Ka ọ bụrụkwa onye ga na-edu+ mba niile na onye ga na-achị+ ha. 5 Ị ga-akpọ mba ị na-amaghị. Ndị sikwa ná mba na-amaghị gị ga-agbakwute gịN’ihi Jehova Chineke gị,+ bụ́ Onye Nsọ Izrel. Ha ga-agbakwute gị maka na Chineke ga-eme ka ị dị ebube.+ 6 Chọọnụ Jehova ugbu a unu ga-achọtali ya.+ Kpọkuonụ ya ugbu a ọ nọ nso.+ 7 Ka onye ajọ omume hapụ ụzọ ọjọọ ọ na-eso.+ Ka onye ọjọọ kwụsị iche echiche ọjọọ. Ya lọghachikwute Jehova, onye ga-emere ya ebere.+ Ya lọghachikwute Chineke anyị, n’ihi na ọ ga-agbaghara ya mmehie ya kpamkpam.+ 8 Jehova kwuru, sị: “Otú m si eche echiche dị iche n’otú unu si eche echiche,+Ụzọ m dịkwa iche n’ụzọ unu. 9 N’ihi na dị ka eluigwe dị elu karịa ụwa,Otú ahụ ka ụzọ m dị elu karịa ụzọ unu,Otú ahụkwa ka otú m si eche echiche si karịa otú unu si eche echiche.+ 10 N’ihi na dị ka mmiri si esi n’eluigwe ezo, snoo esikwa n’eluigwe daa,Ma, ha anaghị alaghachi ebe ahụ ruo mgbe ha dere ala, mee ka ihe a kụrụ na ya puo, meekwa ka ọ mịa mkpụrụ,Onye chọrọ ịgha mkpụrụ enwee mkpụrụ ọ ga-agha, onye chọrọ iri ihe enweekwa ihe ọ ga-eri, 11 Otú ahụ ka okwu si m n’ọnụ pụta ga-adị.+ Ọ gaghị agba aka lọghachikwute m,+Kama, ihe masịrị m* ga-emerịrị.+ Ihe m kwuru ga-emezurịrị otú ahụ m si kwuo ya. 12 Unu ga-eji ọṅụ pụta.+ A ga-akpọlata unu n’udo.+ Ugwu ukwu na ugwu nta ga-eti mkpu ọṅụ ma unu lọta.+ Osisi niile dị n’ọhịa ga-akụkwa aka.+ 13 Osisi junipa ga-anọchi osisi ogwu.+ Osisi metụl ga-anọchikwa ahịhịa akụwa. Ọ ga-aghọ ihe ga-eme ka aha Jehova na-ede ude.+ Ọ ga-abụkwa ihe àmà ga-adịru mgbe ebighị ebi, nke na-agaghị ala n’iyi.”
^ Ma ọ bụ “ego unu tara ahụhụ kpata.”
^ Ma ọ bụ “akwụsị igosi ya ịhụnanya pụrụ iche.”
^ Ma ọ bụ “ihe bụ́ uche m.”